नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री आलेको प्रश्न, वाइडबडी विमानलाई घाममा किन सुकाएको ?
बुधबार, कात्तिक ३ २०७८ ०९:२७ AM
काठमाडौं । नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमको विमानहरुले उडान नगरेकोमा असन्तुष्ठि जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेका मन्त्री आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई वाइडबडी जाहाज किन घाममा सुकाएको ? भनेर प्रश्न गरे ।
शुक्रबार​ २२ असोज २०७८ ०७:५७ PM मा प्रकाशित